A400M v2.0 ibudata Airbus Military AX FSX & P3D - Rikoooo
downloads 74 904
Patrick Le Luyer, nke Andreas Rotowski mepụtara. P3Dndakọrịta v4 nke Rikoooo
Emelitere na 01 / 12 / 2018 : Ndakọrịta na Prepar3D v4 +, ndochi nke 32-bit gauges. Auto-installer 10.5
Emelitere na 14 / 05 / 2015 : Version 2.0 - Batrị ọhụrụ VC, Avionic, Nav-GPS, Autobrake, Lights, Deice, Fuel Pump and Generator switches, Master warn, TCAS alert, Fire gear, FMC, page fuel, EICAS, Callouts, new right / mid seat VC anya na usoro eletrik reworked. Tinyere na ọ bụ Bob Chicilo nke kachasị na-agbapụ ọkụ.
Model kere Gmax na mebere kokpiiti na omenala ụda, abụọ repaints gụnyere: Royal Air Force, French Air Force, German Air Force, cam. -Agụnye mmelite nke ụgbọ elu nlereanya na kwukwara igwefoto echiche si 22 April 2015. Nkọwa dị na https://oldpat.e-monsite.com
Ke ata ụwa
The Airbus A400M bụ a agha iga ugbo elu mere site Airbus vasatail na-atụ anya na tinye ozi n'etiti 20,123 na 20,144. Ọ bụ ugbu a na-achịkwa asatọ mbipụta nke 174 mba dị iche iche: Germany, France, Spain, United Kingdom, Turkey, Belgium, Luxembourg na Malaysia. South Africa emeela n'aka nke kagbuo ya iji na Chile na-eme ya mbụ akwụkwọ ozi nke nzube ha. Nzube ya bụ ka ịgbakwunye ma ọ bụ dochie ẹdude fleets, ịka nká, esịnede American C-130 Hercules ma ọ bụ C-160 Franco-German Transall.
Direction nke adiana nke propellers
A zuru ezu dị ezigbo mkpa: echiche DBE (Down N'agbata Engines), ya bụ "Agụba ala n'etiti engines." Na nke ọ bụla ọkara nku, ntụziaka nke adiana nke propellers na ma engines na-nwesịrị, na n'ala ije nke pupụtara na-erukwa n'etiti engines na n'ihe dị ka n'etiti nku ya, nke mere na eruba n'ime na ume nke Onye UM UBARA na-lekwasị.
A nhazi a họọrọ isi iwelata asymmetry na-adị bụrụ na nke engine ọdịda, karịsịa nke ndị na mpụga moto (nke bụ nkịtị na ndị agha ugbo elu na a nkiri nke ọrụ). Ma ọ na-nwere ọtụtụ pụtara: obere mgbalị ke nku, n'ebe o kwere mee enyemaka Ọdịdị. Ke adianade do, na nke nke nwayọọ e belata ebe ọ bụ na yaw mgbazi pụrụ ịdị ala bụrụ na nke engine ọdịda, mbenata ikpuru. Abụọ ndị a atụmatụ ekwe ka ukwuu nso ike ma ọ bụ na-ebu a arọ payload maka otu ego nke carburant50. The anọ engines ndị bụ n'ezie yiri, ma abụọ engines na-onwem na a gia reversing ntụziaka nke adiana nke propela.
N'adịghị ka An-70 na An-22, A400M adịghị eji propellers, oké ọpụrụiche nke Russian-Ukrainian engine, aerodynamic uru na-dechapụ site na ibu ibu na complexity elu. (Source Wikipedia)
Onye edemede: Patrick Le Luyer, nke Andreas Rotowski mepụtara. P3Dndakọrịta v4 nke Rikoooo